I-Ovida yokwazisa rhoqo yokucacisa ngokucacileyo ngeplastiki ebonakalayo evulekileyo yesambrela esambrela
Umbrella we-Ovida isambrela esithe ngqo, isambrela esicacileyo
Into NO.: OV10011.JPG
Ixesha Lead: 15 DAYS
Imveliso Orgin: CHINA
Intlawulo: EXW / FOB / CIF / DAP / DDP
Ixesha Sample: 5-15DAYS
Into NO.: I-OV10011
Le sambrela yefashoni yabasetyhini, isambrela somtshato, isambrela sepati, isambrela esinexabiso eliphantsi.
Olunye ukhetho lombala olufana neambrela emhlophe ecacileyo yeplastiki, isambrela somtshato waselwandle ocacileyo
Umbala wokudibanisa isiphatho esimilise i-J, isambrela esikhanyayo esimthubi, ngokucacileyo isambulela se-pvc
Fumana isambrela esineendlela zakudala zokugxotha amanzi ukuhamba kwakho, uhambo lwakho, okanye umsitho ovulekileyo.
Isambrela sethu esicacileyo esivulekileyo esizenzekelayo sinika ikhava efanelekileyo kwimvula elula nasemoyeni.
Isambrela sethu sama-48 one enye ineengcebiso ezirhangqiweyo kwiimbambo ezenza ukuba kukhuseleke ukuvula nokusebenzisa.
Khetha le isambulela sangaphandle senziwe kakuhle kubahambi okanye ngegalufa kuluhlu lwakho lwesipho.
Isambrela sethu semvula sibonisa i-polyester dome enganyangekiyo, isibambo se-resin, kunye nesinyithi sombambo kunye neembambo.
Sinokwenza imfuneko yokubeka ilogo okanye igama leambrela, kufuneka uthumele uyilo lwakho kwi-imeyile yethu info@ovidaumbrella.com
I-Ovida Umbrella ngumenzi weambrela we-OEM ofumaneka eXiamen China ukusukela ngo-1998.
Sizimisele ukusonga isambrela sokuhamba, iambrela yegalufa, isambrela sokuncamathisela, ukubuyela kwizambrela, kunye neeambrela zokwazisa. Ukuprintwa kwe-3D, ukukunika eyona ndlela iphambili ngokuprinta i-silkscreen, i-CMYK, ukuprinta kobushushu, ukuPrinta kweRotary, isitampu sefoyile eshushu njl.
Ngokusekwe ngaphezulu kwamava eminyaka, iqela le-Ovida Umbrella sele likhulile kwaye laba likhonkco elibaluleke kakhulu nelizinzileyo phakathi kwabathengi kubo bonke abenzi bezinto. Sixhasa ukunceda ukunika uyilo kunye nophuhliso lwemveliso entsha ngaphambi kokuba kugqitywe iodolo, sinika isisombululo esisebenzayo nesobungcali esisekwe kulwazi lwethu lobungcali.
Umzi-mveliso wethu unabasebenzi abangaphezulu kwama-400 + abanamava, anamava awomeleleyo kulawulo lwemveliso nolawulo lomgangatho. Sisebenza kunye ukwenza into enye kakuhle, kwaye sisebenzela bonke abathengi abasuka kude ngentliziyo yethu yonke.
Ukuba uzilungisile iambrela ufuna unxibelelane nathi apha info@ovidaumbrella.com
Egqithileyo I-Ovida yokuZenzekelayo eLondon yokwakha iPlastiki yePlastiki yePlastiki ecacileyo yeDome Umbrella
Okulandelayo: I-Ovida yokugoba kathathu ngokuzenzekelayo evulekileyo yokuNgena kweFayibha yokuFakelwa kweFayibha yeGlasi
isambrela esinexabiso eliphantsi
Iambrela yeplastiki ethe tye
I-1.8m * 8ribs isambulela saselwandle esinee-patio ezinokuhlengahlengiswa ...
I-Ovida 3 isonga i-Umbrella yokuphela okuphezulu nge-Automati ...
21 intshi 8 iimbambo manual evulekileyo uyilo yokubamba eyodwa ...
Isambrela esenzelwe wena, Ukusongelwa kwangaphandle, Umbrella wemvula, Isambrela soKhuseleko oluNgenawo umoya, Iisambrela zesiko lesiqhelo, Isambrela esisesikweni,